सांसद रेशम चौधरीसहित क-कसलाई जन्मकैद? को-को छुटे?
सुरज डिजी खनाल बुधबार, फागुन २२, २०७५
धनगढी–२०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार रहेको आरोप लागेका सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ।
जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको एकल इजलासले आज बुधबार त्यस्ताे फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार इन्द्र कठायतले जानकारी दिए। साे मुद्दामा वादी र प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीहरूकाे बहस मंगलबार सकिएको थियो।
घटनाकाे ४२ महिनापछि गत बुधवारदेखि तोकिएको पेशीअन्तर्गत एक सातासम्म बहस चलेकाे थियाे। वादीतर्फबाट जिल्ला न्यायधिवक्ता विष्णु पौडेल र सहायक न्यायधिवक्ता लक्ष्मी शर्माले बहस गरेका थिए।प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता हरि फुँयाल, गंगाराम पाध्याय, मिलन राई र गजेन्द्र केसी लगायतका कानुन व्यवसायीहरुले प्रत्युत्तर फर्काएका थिए।
क-कसलाई जन्म कैद?
सासंद चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृजमोहन डगाैरा, राजेश चौधरी, विरबहादुर चौधरी, प्रदिप चौधरी, सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धि महलको १३(३) बमोजिम जनही जन्मकैद सजाय सुनाईएको हो।
तर श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात १० बर्ष सजाय तोकिएको छ। उनीहरुले पक्राउ परेको मितिदेखि २० वर्ष जेलमा बस्नु पर्नेछ। त्यस अनुसार रेशम चौधरीले २०९२ सालसम्म जेलमा बस्नु पर्नेछ।
लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरीया, सन्तराम चौधरी, जितबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, सन्तोष चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीलगायत १२ जनालाई ३ बर्ष कैद तोकिएको छ।
यीमध्ये चुन्नीराम चौधरीबाहेकले तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेकोले आजै थुनामुक्त गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। त्यसका लागि अदालतले कारागारलाई पत्र पठाइसकेको छ। चुन्नीराम यही फागुन ३० गते रिह हुनेछन्।
तीन जनालाई सफाइ
तहाँवर अलि जागा, बिसराम चौधरी र रामनरेश चौधरीलाई अदालतले सफाई दिएकाे छ। यसैगरी करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भईसकेकाले आजै थुनामुक्त गर्न आदेश दिईएको छ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षीय बालक टेकेन्द्र साउदको मत्यु भएको थियो। फरार रहेका ३१ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएकाे छ।
घटनापछि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान , ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी काे मुद्दा दायर भएको थियो। सांसद चौधरी, नेता लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरीलगायत २७ जना पुर्पक्षको लागि थुनामा थिए।
घटनालगत्तै फरार भएका चौधरीले गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा २० हजार ९ सय ३५ मतको अन्तरले विजयी भएका थिए। गत वर्ष फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका चाैधरीले पौष १९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ खाएका थिए।
घटनामा मृत्यु भएकाहरुः
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोरा सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामबिहारी थारु सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार ललित साउद प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द दुई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद
तत्कालीन सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला मिलाएर एक प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन चर्किरहेका थियो। त्यसै बेला थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले कैलाली कञ्चनपुरलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन घाेषणा गर्‍याे।
सो क्रममा आन्दोलनरत थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ ७ गते सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम थियो। तर, निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलनकारी अघि बढेपछि आन्दोलन हिसांत्मक भएको थियो। छुरा, भाला, बन्चरोसहित घरेलु हतियारसहितका आन्दोलनकारीहरूले जानकी गाउँपालिका (तत्कालीन मुनुवा गाविस पशुहाट बजारनजिक) सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २२, २०७५ १६:२०
आइतबार, साउन १७, २०७८ २२:२८ सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर भित्र रहेको मूर्तिको चाँदीको मुकुट चोरी